Imandarmedia.com.np: नैना भाउजु : जब दिउँसै उनी हाकिमको फन्दामा परिन्
Big News, Literature » नैना भाउजु : जब दिउँसै उनी हाकिमको फन्दामा परिन्
नैना भाउजु : जब दिउँसै उनी हाकिमको फन्दामा परिन्
नैना भाउजू ल्वाङ् सुकुमेल चपाउँदै चौतारीमा निस्किएपछि सबै हाकिमहरूमा उत्साहको सञ्चार हुन्थ्यो । एकछिन गफको सिङौरी खेलेपछि अलिक शान्त मन लिएर सबै आ-आफ्ना निवासतिर लाग्दथे । बाँझी, टटली अलिक कुरौटे खालकी नैना भाउजू सबैलाई हिकेर गफ गर्दथिन् । हिजो अस्ति जस्तै आज पनि सबै हाकिमहरू सिरानबजारको चौतारीमा बसेर गफ चुट्तै थिए ।
भित्री मनैदेखि सबै नैना भाउजूको प्रतीक्षामा अल्झीएका थिए र भाउजू त्यस चौतारीमा निस्किएपछि एकछिन उनीसँग जिस्किँदै, इत्रिँदै मुखका कीरा मारेर र्फकने सुरमा थिए । प्रत्येक दिनजसो साढे नौ बजेतिर अफिस जान भनेर नैना भाउजू त्यो चौतारोमा निस्किदा सिरानबजारमा पर्ने चौतारोमा जम्मा भएका हाकिम-अधिकृतहरू उनलाई बीचमा पारेर चारैतिरबाट तछाड-मछाड गरेर गफ चुटिरहेका देखिन्थे ।
सुदूरविकट भौगोलिक मध्य प्रदेशमा अवस्थित त्यस जिल्लाको सदरमुकाममा केही विद्यार्थी र तल्लो तहका जागीरदारबाहेक महिलावर्गको त्यति उल्लेख्य गतिविधि थिएन । कुनै हाकिमले परिवार लगेको थिएन । कुनै कार्यालयमा एकाध घण्टा र कतिमा त कामै नहुने त्यस दुर्गम जिल्लाको सदरमुकाममा भएभरका अड्डा-अदालतहरू आसपास फैलिएर त्यही सिरानबजार भनिने क्षेत्रमा केन्द्रित थिए । अड्डाहरू भएको ठाउँमुनि तल माथि आउने जाने गौँडोकै मुखमा सानो चहुर अनि दुइ विशाल वरपिपल दम्पतिहरू उभिएका थिए । सहस्र हाँगाबिङ्गाहरूमात्र फैलिएको त्यस विशालकाय वरपीपल जोडीको फेदमा अत्यन्त सफा, सुन्दर र फराकिलो चौतारो थियो ।
बिहानैदेखि त्यही चौतारामा निस्किएर त्यस जिल्लाका हाकिम, अधिकृतहरू चार-पाँच कप चिया सुर्क्याउने, सरकारको आलोचना गर्ने अनि आ-आफ्ना स्वास्नी र छोराछोरीको प्रशंसा गर्ने र बिहान बितिसकेपछि नैना भाउजूसँग एकछिन गफ छाँटेर मुखको चिलाई मेट्ने गर्दथे । महिला विकास अधिकृत बाहेक त्यस जिल्लामा कुनै पनि पोथी हाकिम थिएन । हुन त नैना भाउजू कुनै एक विकासे अड्डामा पियन पदमा कार्यरत थिइन् ।
नसाले लठ्ठ परेको त्यो अधिकृत कुनै कुरा सुन्ने अवस्थामा थिएन । तर त्यतिबेर बाहिर कसैले ढोका खोलिहाले पनि त्यसको दुष्परिणाम नैना भाउजूले भन्दा अर्को पक्षले बढी व्यहोर्नु पथ्र्यो ।“सरलाई अप्ठ्यारो भयो क्यार ! घुडाहरू कार्पेटमा दरालिएर दरफरिएजस्ता छन् । बरु सोफामाथि ओछ्यान लगाएको भए हुन्थ्यो नि !” नैना भाउजू हाकिमलाई माया देखाएर गन्गन् गर्दै थिइन् ।
नसा बढी भएर होला । जुन बेगसाथ सम्वेदनाहरू झुल्किएर नैना भाउजूभित्र अन्तरनिहित हुनुपर्ने हो त्यो अनुभव भएन । अर्को पक्ष अलिक शिथिल बन्दै रक्तसञ्चार मन्द भएपछि अतृप्त इन्द्रियहरू र बिच्किएको मनस्थिति लिएर नैना भाउजू जुरुक्क उठिन् र पेटीकोट धोती मिलाउन थालिन् । “एड्स हुन्छ भन्छन् सर ! हिजो आज सर त केही पनि लाइसिन्न नि ।” नैना भाउजू अर्कोतिर फर्किएर लुगा मिलाउँदै र भन्दै थिइन् ।
“कहाँ कसले हल्ला गरिदिएछ नचाहिने । यस्तो शुद्ध पहाडी हावापानीमा पनि के को एड्स भैलिन्छ ।” पुरुषपक्ष प्रतिवाद गर्दै थियो । अगिपछि औधि मन पर्ने पदार्थ पनि आज अलिक सिक्सिको र दर्ुगन्धझैँ लाग्यो । उनी त्यहाँबाट हतार-हतार बाटा लागेकी थिइन् । कहिलेकाहीँ उस्तै हाकिमले कर गरेको बेला नैना भाउजू अलिअलि पिउथिन् पनि । आफैले अलिअलि पिएको बेला अरूको गन्ध त्यति खराब लाग्दैनथ्यो । बरु आनन्ददायक प्रतीत हुन्थ्यो ।
तर आज त्यो मान्छेले दिउँसै ठर्रा घिचेर डुङ्डुङ्ती गनाएको चाहिँ उनलाई पटक्कै मन परेन । सायद त्यो थाहा पाएकी भए आज उनी चिठी लिएर त्यहाँ जाँदै जाँदैनथिन् । गए पनि हाकिमसमक्ष देखा नपरी दर्ता फाँटबाटै फर्किने थिइन्, तर त्यसो भएन । भेटघाटको शिष्टाचार पूरा गर्न गएकी थिइन् । पहिले हाकिमले बोलाउँदैमा कोठाभित्र पसी हालिछन् । पछि फुत्किन खोज्दा अलिक अप्रिय स्थिति सिर्जना भइहाल्न सक्ने देखेर उनी त्यस मिलनविन्दुको सहयात्री बनेकी थिइन् ।
यतिबेर नैना भाउजू श्रीमान्को पुरानोखाले आवासगृहको भित्री शयनकक्षमा रसरङ्गमा व्यस्त थिइन् । केही वर्षअघिदेखि नै पत्नीवियोगमा परेका विधुर बृद्ध र बेलाबखत दम रक्तचापले सताइरहने यी बबुरा हाकिमले सायद निकै दिनपछि रसरङ्ग मनाउन भनेर नैना भाउजूलाई बोलाएका थिए । भुवाने नाउको उनको अर्दलीले तीनचार दिनको प्रयासपछि मात्र नैना भाउजूलाई बोलाउन सफल भएथ्यो । यता बिहान बेलुकी चाँडो ढिलो र रात साँझ बाहिर बस्न नैना भाउजूलाई अनुमति थिएन । आज बिदाको दिन भए पनि बजारमा जरुरी चीज किन्नु छ भन्ने निहु पारेर नवै बजे भात भान्सा भ्याएर पतिको चङ्गुलबाट उम्केर उभो लागेकी थिइन् उनी । “आज श्रीमान् आउनु भएन” हाकिमहरूको तास खेल्ने अखडामा चर्चा चलेको थियो ।
र्सवाङ्ग नाङ्गी नैना भाउजूका अङ्ग-प्रत्यङ्गहरू हेर्दै उनी बर्बराउँदै थिए – “चीजले ऐन मौकामा काम नदिएपछि … ।”
“एकदम कडा र्ठराचाहिँ एक बोतल खानु हुन्छ दिनको । त्यसपछि उहाँ इन्तु न चिन्तु भएर केही नखाई बेहोस भएर सुत्नु हुन्छ, उहाँसँग हिजोआज त सम्पर्क र बस उठ केही हुँदैन । अझ कहिले त एक बोतलले नपुगेर अर्को बोतल थप्नुहुन्छ । अरू नास्ता खाना सब
आज हाकिमलाई भनेर ल्याएको कालो अङ्गुर डर्ीर्.इ. साहेबकै निवासमा छाडेर गइछन् ।
अर्को दिन पनि बिहानैदेखि पानी पर्‍यो । चौतारीको जमघट शून्य रहृयो । सबेरैदेखि नै नैना भाउजू पनि जिल्लाका बडाहाकिमको निवासमा थिइन् र कहिले दाल-चामल केलाउने, कहिले लुगा बिस्तारा मिलाउने, कहिले भान्छातिर गएर भान्छे केटालाई खाना राम्रो बनाउन अहर््राईसिकाई गर्ने जस्ता कामहरूमा व्यस्त थिइन् । प्रत्येक धन्दा र आदेश सँगै उनका चञ्चल आँखाहरू हाकिम साहेबतिर परिरहेका हुन्थे । हुन त प्रभातकालीन भेटमै उनीहरूले शारीरिक कामोद्दीपनको ज्वारभाटालाई शान्त पारिसकेका थिए र सम्भोगान्तरमा क्षरित आलो गन्ध डुङ्डुङ्ती गनाएर सन्तोषको अनुभूतिमा मग्न थिए ।
भर्खरै प्रौढताको सिँढीमा उक्लिन थालेको हाकिम साहेबको हृष्टपुष्ट ज्यू जवान देख्तै अक्सर नैना भाउजू भावातिरेकको अवस्थामा पुग्दथिन् । उनको हँसिलो चेहरा, रसिक स्वभाव, विनोदी आदत र सौर्न्दर्य पारखी चेतनाले गर्दा नैना भाउजू लठ्ठ परेकी थिइन् र अरू हाकिमसँग भन्दा उनैसँग बढी सम्पर्क पनि गर्दथिन् । तर उनीकहाँ लाग्ने भीड, व्यस्तता र बेसी जिम्मेवारीले गर्दा बेलाकुबेला जथाभावी आउन जान र बसउठ गर्ने जस्ता कुरामा ती दुवै र्सतर्क थिए ।
दमिनी केटी भन्दै रुदै गर्दै थिई । उनको मन कुँडिएर घुँक्क घुँक्कमा विस्फोट हुँदै थियो । नैना भाउजू उसलाई सम्झाइबुझाई गर्दै त्यो बच्चा हातमा लिएर खेलाउँदै पनिथिइन् । उनलाई त्यो बच्चा मागेर पालौँ जस्तो लागिरहेको थियो । निःसन्तान नैना भाउजूको उजाड मातृत्व त्यो सुन्दर, स्वस्थ र असहाय बालकप्रति दयाद्र बनेर पग्लिदै थियो । बडाहाकिमले त्यो केटीसँग निवेदन लिएर तोक आदेश गरिदिए ।
अनि भान्से केटोलाई साथमा लगाएर कारवाही अघि बढाउन ठानातिर पठाइदिए । भान्छे केटो अघि लाग्यो । अलिक समालिएर त्यो केटी पछि लागी । “आ भर्खर प्रजातन्त्र आ’को छ के अफिस गइरहने सर सधैँ !” नैना भाउजूले अलि पात्तिएझैँ गरेर भनिन् । अनि सबै झयालढोकाहरू डामडुम्म लगाएर एउटामात्र खुलेको झयालबाट छिरेको छिर्के प्रकाशमा हाकिम साहेबलाई निर्वस्त्र बनाउँदै ओठ, मुख, हात र संवेदन अङ्गहरूलाई मधुरसले भिजाउन थालिन् । हुँदाहुँदै पलङ्गको चार्ँइचर्ुइ, चुरीहरूको छिर्लिङ विर्लिङ ओठको चित्कार र गलाको मधुरो चित्कारसँग ती दुइ नग्न स्त्री-पुरुषहरू समागमको मधुर महोत्सवमा मुखरित हुन थाले ।
वैधव्य वरणको केही समय बितेपछि नैना भाउजू झन् सुन्दर, सफा र पुखली बन्दै गइन् । सुरुको सात्विक आचरण र शान्त प्रकृति धेरै दिन दीगो रहन सकेन । अभिसारको क्रम फेरि सुरु भयो । विना बारबन्धन स्वच्छन्द विचरण गर्ने जङ्गली अर्नाजस्तै उनी स्वतन्त्र र छाडा बनेर निर्वाध अभिसारमा सक्रिय भइन् । यता भित्रभित्रै उनको मनमा चिन्ता पनि पलाइरहेको थियो । किनभने पहिले पतिरूपी बन्धन या आड भरोसा थियो । पतिको अस्तित्वमा उनको अभिसार सुरक्षित थियो । कहिल्यै गर्हित र लाञ्छित बन्ने शङ्का थिएन । समयको नियन्त्रण थियो । अब त्यो नरहँदा कतै समाजको आँखामा अवहेलित र गर्हित वाइफाले बनिन्छ कि भन्ने धुकचुकी उनको अन्तःस्करणमा टाँस्सिइरहेको थियो ।
फेरि एउटा कालखण्ड बितेछ, समयचक्र आफ्नै गतिमा गुड्दै थियो । केही समयदेखि रजस्वला हुन बन्द भएपछि विधुइ नैना भाउजू फेरि एकपटक स्तब्ध भइन् । डाक्टर जचाउँदा गर्भ रहेको ठहर भयो । व्यभिचार र अभिसारमा विचरण गरिरहने उनको घुमन्ते जीवनमा एक्कासि परिवर्तनहरू देखिए । उनी अन्तरमुखी र एकाङ्की बन्दै गइन् । अलि दिनपछि फेरि मन दरिँदै गयो । उनले आफूलाई दुइ जीउ भएको समाचार सबै सम्बन्धित हाकिमहरूकहाँ पुर्‍याएर खैलाबैला मच्चाइदिइन् ।
सबैले उनलाई गर्भपतन गराउने सल्लाह दिए । अनि त्यसको लागि पर्ने भाडा भरोट र आर्थिक दायित्व आफू ब्यहोर्न तत्पर पनि भए । तर नैना भाउजू अर्कै कुरा सोचेर दरिदै गएकी थिइन् । आफ्नो गर्भ संरक्षण गरेर एउटा सन्तान जन्माउने र कुनै हाकिमको धर्मपत्नी भएर जीवन बिताउने चाह उनमा तीव्र बन्दै गयो । उनी त्यहाँका अलिक जवान र कमाई काज हुने खाइलाग्दा हाकिमहरूलाई आफू श्रीमती भएर बस्ने प्रस्ताव राखेर मन चोर्न थालिन् । त्यसपछि उनलाई देख्नेबित्तिकै सबै हाकिमहरू दुर्दुहाइ गरेर तर्सिन थाले ।
“केही नलागे अदालत गएर पनि आफ्नो पति कायम गरेरै छाड्छु । पतिविना गर्भरहँनै सक्दैन । मेरो लागि सबभन्दा बलियो प्रमाण नै यही भइहाल्यो नि !” नैना भाउजू मनमनै तर्क गरिरहन्थिन् । उनको आत्मकेन्द्रित जीवनमा कोही सहायता गर्न तत्पर देखिएन । आजभोलि गर्दागर्दै बढ्दै गएको भ्रूणले उनको शारीरिक व्यक्तित्व सामाजिक प्रतिष्ठा तहसनहस भइसकेको थियो । गाउँ-छिमेकीहरूले तुरुन्त गाउँ छोडेर जाने घुर्कीको आदेश दिइसकेकाथिए । तर नैना भाउजू टसमस गरेकी थिइनन् र कसैसँग कुनै विषयमा सवालजवाफ पनि गर्दिनथिन् ।
जिल्लाका सबै हाकिमहरू सरुवा माग्न काठमाडौं गए रे ! दुइचार दिन यता सिरानबजारको चौतारो पनि खाली र शून्य देखिन्थ्यो । हुँदाहुँदै नैना भाउजू मरुभूमिको एक्लो रुखझैँ असहाय र एकाङ्की बन्दै गइन् । तैपनि आफ्नो पेटभित्रको भ्रूणलाई कुनै हाकिमको जिम्मा लगाएर आफू सम्पन्न गृहिणी, हाकिम साहेबनी बन्ने इच्छा उनको मनमा झन्झन् तीव्र बन्दै गइरहेको थियो ।
नैना भाउजु पल्लव साहित्यिक पत्रिका–१२, औँ अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।